नगर बसमा महिला चालक र परिचालक::Best News Experience from Nepal
नगरप्रमुख डा .धवलशमशेर राणाले भने, “हाम्रा दिदी बहिनी कहाँ कम छन् र ? जस्तोसुकै काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने देखाउनका लागि यो काम शुरु गर्दैछौँ ।” महिला सशक्तीकरणका उक्त काम उदाहरणीय हुने प्रमुख डा. राणाको बुझाइ छ । महिलाले घरको चुलो चौकाको काम सीमित हुनुपर्छ भन्ने कही नलेखेकोउनले बताए ।
नतिजा आएपछि बस सञ्चालनमा आउँछन् । सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार असोज पहिलो साताभित्रै नगर बस सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ । रासस